बक्सअफिसमा भिड्दै शाहरुख र आमिर ? « THE CINEMA TIMES
चलचित्र विकास बोर्डलाई हलको चावी बुझाउँछौं : अशोक शर्मा
भारती र हर्षलाई बेल लिन सहयोग गरेको भन्दै एनसीबीका २ कर्मचारी निलम्बित
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह अझै केहि समय सिनेमा हल नखोल्नु
केजीएफ निर्देशकको ‘सलार’मा प्रभाष
सनी देओललाई कोरोना संक्रमण
आदित्यले प्रेमिका श्वेतासँग गरे बिहे
आर्यनको ‘डिसेम्बर फल्स’मा उपासना अनुबन्धित
बक्सअफिसमा भिड्दै शाहरुख र आमिर ?
द सिनेमा टाइम्स, काठमामडौं – बलिउड अभिनेता शाहरुख खान यशराज फिल्मस्को ‘पठान’बाट दुई वर्षपछि कमव्याक गर्दैछन् । उनको कमव्याक सिनेमाको हाल मुम्बई स्थित यशराज फिल्मस्को स्टुडियोमा छायाँकन भैरहेको छ । सिनेमाको छायाँकन सुरुभएसँगै सिनेमाको प्रदर्शन मिति पनि सार्वजनिक भएको छ ।
बलिउड मिडियाका अनुसार ‘पठान’ अर्को वर्षको क्रिसमसमा रिलिज हुनेछ । यही डेटमा शाहरुखको केमियो रहेको सिनेमा ‘लाल सिंह चड्ढा’ रिलिज हुनेछ । आमिर खान र करिना कपुर अभिनित सिनेमासँग ‘पठान’ जुध्ने चर्चाले यतीबेला बलिउड निकै गर्माएको छ ।
‘पठान’मा शाहरुख तीन भिन्न अवतारमा देखिने बलिउड मिडियाले जनाएका छन् । सिद्धार्थ आनन्दको निर्देशनमा निर्मण हुने एक्सन सिनेमामा जोन अब्राहम र दिपिका पादुकोणको पनि मुख्य भुमिका रहनेछ । पठानका लागी जोन र दिपिकाले यशराज ब्यानरबाट महँगो पारिश्रमिक असुलेका छन् ।
‘जिरो’पछि बलिउडमा कमव्याक गर्न लागेका शाहरुखको ‘पठान’मा सलमान खानले अतिथी भुमिका अभिनय गर्ने चर्चा छ । यसैले पनि सिनेमाले बक्सअफिसमा बम्पर बिजनेस गर्ने अनुमान शाहरुखका शुभचिन्तकले गरेका छन् । उनले ‘पठान’को छायाँकन सकाएसँगै राजकुमार हिरानीको सिनेमाको छायाँकन सुरु गर्नेछन् ।
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं- नेपाल चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्माले चलचित्र हल नखुल्दा आदोलनमा उत्रिने
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं- सुशान्त सिंह राजपूत केसमा ड्रग्स एंगल जाँच गरिरहेको नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अझै केहीदिन सिनेमा हल नखोल्न अनुरोध
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं– साउथका चर्चित अभिनेता प्रभाषको नयाँ सिनेमाको आधिकारिक घोषणा भएको छ ।
आर्यनको 'डिसेम्बर फल्स'मा उपासना अनुबन्धित
करोड क्लबमा प्रदीप र कृष्टिनाको 'प्रेमगीत ३'को शिर्ष गीत
केजीएफ निर्देशकको 'सलार'मा प्रभाष